विमान दुर्घटनामा छोरी र श्रीमान गुमाएकी बेड न. ४०७ मा बर्बराइ रहेकी २२ बर्षीय यी आमा, जस्ले आफ्नालाई खोजिरहेकी छन् – (भिडियोसहित) | Dainik Sanjal
Home समाचार विमान दुर्घटनामा छोरी र श्रीमान गुमाएकी बेड न. ४०७ मा बर्बराइ रहेकी २२ बर्षीय यी आमा, जस्ले आफ्नालाई खोजिरहेकी छन् – (भिडियोसहित)
विमान दुर्घटनामा छोरी र श्रीमान गुमाएकी बेड न. ४०७ मा बर्बराइ रहेकी २२ बर्षीय यी आमा, जस्ले आफ्नालाई खोजिरहेकी छन् – (भिडियोसहित)
काठमाडौ – म बंगलादेशी हुँ । मेरो घर राजधानी ढाकामा पर्छ । मेरो विवाह भएको करिब तीन वर्ष भयो । हाम्रो सानो बच्चा पनि छ ।
नेपालको सौन्दर्यबारे मैले पढेकी थिएँ । नेपाल घुमेर आएका साथीहरूले पनि मेरोसामु धेरै वर्णन गरेका थिए । त्यसैले म नेपाल घुम्न आतुर थिएँ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।